Fitaovam-pitaterana vovo malefaka sy mpanofana - Fitaovan'ny China - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fitaovana metaly > Fitaovam-pitaterana vatana
Product Introduction of the Fittings Threaded Threaded Threads
Pipe Coupling, misy karazana fifandraisana telo misy: Fifandimbiasana feno, Fifampitondrana am-bava, fihenam-bidy. Ny Coupling feno dia ampiasaina amin'ny fampifandraisana ireo fantsona kely. Izy io dia nampifandray ny fantsom-panafody na fantsom-panafody ho an'ny fofona na ny tavy. Azonao atao ny manantona ny karazan-tsofina na ny socket. Ny Coupling antsasaka dia ampiasaina amin'ny famoahana kely kely amin'ny sambo iray na sodina lehibe. Azonao atao ny manofa na karazana sokitra. Izy io dia manana saka na tadim-piarenana amin'ny lafiny iray. Ny fampihenana ny fifindrana dia ampiasaina mba hampifandraisany roapolo samihafa amin'ny fantsona. Toy ny fameranam-pivarotan-tsokosoko izay mitazona tsipika midadasika amin'ny tavoahangy, fa kely kosa.
Product Parameter amin'ny fikambanam-behivavy
-20 ° C hatramin'ny 120 ° C
30% T / T mialoha, 70% mandanjalanja mialoha ny fandefasana, azafady mba hampahafantarao anay rehefa vita ny fandoavam-bola, mba hahafahantsika mandamina ny entana haka ASAP. Manao handefasana entana amin'ny 5-7 andro aorian'ny nahazoanay ny fandoavam-bola feno mifototra amin'ny daty sidina
Nalefa nandritra ny 30 andro taorian'ny fandoavana
Ny endriky ny fitaovana sy ny fampiharana ny fikambanam-behivavy
Material: Stainless Steel, Steel Carbon, Stainless Steel, brass, bronze and etc.
Fandrarana fanesorana: NPT, DIN, BSP, BSPP, BSPT sns.
Size: 1/8 "-8" na amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa
fampiharana:Ara-drariny ny fifandraisana amin'ny sambo, ny rivotra, ny entona, ny solika ary ny sisa
Toro-hevitra momba ny vovo-kofehy malefaka
Packaging Details:Standard package, Carton, hazo pallet na mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa
Hot Tags: Fitaovam-pitaovam-pitaterana vehivavy, China, mpanamboatra, mpamatsy, orinasa, vita amin'ny China, Wholesale, Buy, Customized, An-tsompitra, Mponina, Price, Vidy, Teny fohy, High Quality
Fiatatatatahiry vita amin'ny tavyFitaovam-pitaterana vehivavy